Emechara “Ku'damm 63” nke Germany na HDR na DaVinci Resolve | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » Emechara “Ku'damm 63” nke Germany na HDR na DaVinci Resolve
Emechara “Ku'damm 63” nke Germany na HDR na DaVinci Resolve
Fremont, CA - Mee 3, 2021 - Ntucha Blackmagic taa kwuputara na ntinye nke atọ nke aha njirimara minista ZDF ama ama, Ku'damm 63, bụ akara na DaVinci Resolve Studio.
Onye UFA Fiction mepụtara maka onye mgbasa ozi ọha na eze bụ ZDF ma mejupụta nkeji atọ 90, usoro a gara n'ihu na akụkọ banyere mbido mbido mmekọrịta ọha na eze nke German, nke a na-akọ site na ịhụnanya, nnwere onwe siri ike na nnwere onwe nke ụmụnne nwanyị atọ, Monika, Helga na Eva, ụmụ nwanyị nke nna ochie na-achọghị mgbanwe.
Emeputara Post site na Dfacto Motion, ya na Ana Izquierdo na-ahụ maka nhazi ọkwa. Dị ka usoro ndị gara aga, Ana rụkọrọ ọrụ ọnụ na DP Michael Schreitel ma nyere aka ịnakwere oge mgbanwe na-egosi site n'ịgbanwe usoro nke atọ.
“Anyị chọrọ isi n’ọdịchọcha mmiri nke Ku'damm 56 pụọ gaa na-enwu gbaa, nwee mmetụta dị mma karị, n’ihi na nke a abụghị naanị igosipụta oge ịwụli, kamakwa isiokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ n’oge ahụ, dịka uto nke Technicolor telivishọn na sinima, dị ka nakwa inwekwu nchekwube, ”ka Ana na-akọwa.
Agbanyeghi na edebere usoro ndị gara aga na YRGB, emere mkpebi iji nyefee Ku'damm 63 iji pipeline ACES iji kwado SDR na HDR. Nke a pụtara iwughachi osisi ndị dị ugbu a site na ncha n'ime usoro iheomume agba. Ana mepụtara ọnụ abụọ iji mepụta ntọala yana ọkwa nke abụọ iji mepụta palette nke ụda ocher. “Anyị were obere oge iji mee ka obi blọọ anyị dị nro ma werekwa ọnụ mee gamut limiter ebe anyị hụrụ ụfọdụ mmekpa ahụ siri ike na neon hues,” Ana gara n’ihu.
Dika otutu oge eji egwu egwu, usoro a choro otutu oru VFX iji mee ka 1960s Berlin di ndu, Ana na-akowa na ihe ima aka bu ka ya na ngalaba VFX na-aru oru iji mee ka echiche nke ihe di omimi nile, zere ihe ndi ozo site na akuko. "Anyị nwere ọtụtụ mpụta mpụta nke ụlọ egwu Galent nke ezinụlọ na Ku'damm, yabụ ngwaọrụ nkọwapụta doro anya nke Resolve dị mkpa maka nhazi ọkwa zuru oke, yana ọwa alfa maka idepụta ihe ọ bụla na CGI element."
Dị ka SDR ga-abụ usoro nnyefe bụ isi, ọkwa a bụ ntọala maka ụdị HDR, yana ngalaba ihe oyiyi na-etinye ọrụ ahụ na Rec.2020 ma na-agbanwe ihe ngosi n'ime usoro iheomume ebe achọrọ. “Nsụgharị HDR bụ ihe ọ toụ na ọkwa; karịchaa, e mere ka olu na ụzọ dị iche iche a na-eme n'ime abalị pụta ìhè. ”
"A na-eme ihe ngosi ahụ site na nlekọta nlekọta dị ukwuu na nlele anya, site na ụkpụrụ ụkpụrụ site na post, na DaVinci Resolve workflow na-arụ ọrụ dị mkpa," ka Ana kwubiri. “Imekọrịta na director na DP, anyị enweela ike iji na agba agba otu nzọụkwụ n'ihu iji mesie ihe odide’ ibu, nke dị mkpa. Inwe a mgbanwe, pụrụ ịdabere post mmepụta pipeline kwere ka anyị wepụta oge nka nke zuru okè oge aesthetic dị ka akụkọ backdrop. ”
Foto ngwaahịa maka DaVinci Resolve Studio, yana ndị ọzọ niile Ntucha Blackmagic ngwaahịa dị na www.blackmagicdesign.com/media/images.
Ntucha Blackmagic Davinci Resolve Studio Ku'damm 63 2021-05-03
Previous: SoftAtHome na-esonye na Network Solution Provider Network
Osote: TSG, Vislink Onye Mmekọ iji kwado Nkwalite Ntanetị ATSC 3.0 nke Ọchịchị na Alabama Public Television